I-China Luxury Matte Black Filtered Shower Head yoMvelisi kunye noMthengisi | Xinpaez
Matte oMnyama ogqiba-Ishawa yakho yesandla iya kujongeka imangalisa. Ukugqitywa kweMatte emnyama kujika iintloko.
UBUGCISA BOKUFUNDA KWABASEBENZI Uxinzelelo oluphezulu lwenza ukonga amanzi ngama-30%.
Ukucoca kabini-Isihluzi sediski siqulethe ubuhlalu, isiphatho sokucoca: I-PP yomqhaphu, ifayibha yeCarbon, uVitamin C
Imveliso ebhalwe ngokupheleleyo. Materials (ABS, PC) kunye nemibala ungenziwa ngemfuneko
Ugcino lwamanzi, luhluziwe
10 / 3.4 intshi
Matte Mnyama Ishawa yakho yesandla iya kujongeka imangalisa. Ukugqitywa kweMatte emnyama kujika iintloko. Ukugqitywa komnyama omnyama ngokugqibeleleyo kunokwenzeka. Benza ukuba ukwazi ukucoca ngokulula kwaye ukhusele ukugqiba kwesitya esimnyama matte ngaphandle kokutshintsha imbonakalo. Zonke iimveliso zokhathalelo lwepeyinti yeXinpaez zenziwe ngokukodwa ngaphandle kweesilicones, ii-wax kunye neefiller, oko kuthetha ukuba abayi kongeza i-gloss kwaye baphazamise ukubonakala kwe-matte. Abantu bayathanda ukuthetha ukukrwela matte ngokulula kunokubengezela, kodwa ayiyonyani leyo! Ipeyinti yeMat ayisiyo-scratch-proof, ngokucacileyo, kodwa ngekhe ube nayo imiba ngamanqaku okuhlamba ubuncinci.
UBUGCISA BOKUFUNDA KWABASEBENZI ihambisa uxinzelelo lwamanzi olumangalisayo olunokuthi unkqonkqoze iikawusi zakho (ukuba ubunokuzinxiba eshaweni), kodwa ke ukuhamba kuthambile-kuthambile kwaye kuyonwabisa! | I-Laser Perforated Micro-Jets zenza iitonela zamandla ezijikelezayo ezikhupha amachaphaza amancinci omoya oxubileyo kunye namanzi ngamandla amangalisayo kunye nokuhamba kwesantya okufumana ukonga amanzi okungama-30%.
IZIHLULELO ZAMANZI EZAKHIWEYO ukuhambisa phambili izigaba ezininzi Ukucocwa kwamanzi okunempilo, isikhumba esikhangeleka sincinci kunye neenwele.
IFILILI acoca amanzi eshawa ngokuthintela intlenge kunye nokungcola.
HANDLE FILTER IKARDRIDI Idibanisa i-KDF enamandla, iCalcium Sulfite kunye neCarbon eSebenzayo ukususa ilothe, i-chlorine, i-pesticides kunye nesinyithi esinzima, kuthintela umhlwa, ikalika kunye nevumba, ukuthambisa amanzi kunye nokuphucula ibhalansi ye-PH.
IAROMA IVITAMINI C Isihluzi samanzi singafakwa ngaphakathi njengesixhobo sokuphatha, esiqulathe ukugxila kwe-vitamin C ukukhuthaza iinwele kunye nolusu olusempilweni.
Egqithileyo Uxinzelelo oluphezulu lokuhlamba intloko- i-Chrome
Okulandelayo: Imfashini iNtloko yokuGcina amanzi eSandleni
Intloko yeshawa efanelekileyo
Intloko yeshawari ephathwa ngesandla
intloko yeshawari yamanzi anzima
intloko yeshawa ngamaso
Intloko encinci yeshawari encinci